Maitiro ekuona iyo RGB kana hexadecimal kukosha kweipi pixel pane yako Mac skrini | Ndinobva mac
Maitiro ekuona iyo RGB kana hexadecimal kukosha kweipi pixel pane yako Mac skrini
Jesu Arjona Montalvo | | Mac makomputa, Tutorials
RGB, inozivikanwawo se Tsvuku / Green / BhuruuNdicho nzira yekuzivisa mavara inoshandiswa nemakomputa monitors. Ruvara roga roga rune RGB yayo kukosha, uye izvi zvinokonzerwa nemusanganiswa wemavara matatu aya pamwe chete vanoita mhando yerudzi iyo yauri kutarisa ine toni kana imwe. Aya maRGB kukosha anogona kushandiswa nekuda kwezvikonzero zvakasiyana, asi zvakanyanya kune avo vanoshanda mukati Shanduro yemifananidzo nemifananidzo, kana vanogona kunge vachitamba navo mifananidzo, uye kuti yakakosha kune a Webhu dhizaini.
Chinhu chidiki chinozivikanwa chake Mac ndeyekuti yako yekushandisa system inouya nemamita iyo inogona kuona RGB uye hexadecimal ruvara rwechiratidzo pixel kana ndoda yako Wallpaper iwe unayo pane yako desktop, uye mune ino dzidzo tirikuratidza kuti zvinoitwa sei.
1 Ziva kukosha kweRGB yeipi pixel pane yako Mac skrini.
2 Ungazviwana sei mune hexadecimal fomati.
Ziva kukosha kweRGB yeipi pixel pane yako Mac skrini.
Kunyangwe iwe uri kuyedza kushandura pikicha, uye iwe unofanirwa kuchinja toni yevara kana iri mukati Adobe Photoshop o Pixelmator, kana iwe urikuyedza kugadzira yakajeka makumi mashoma graphic, kuziva iyo RGB kukosha kwepikisheni mune iripo nharaunda kunogona kubatsira zvakanyanya mukuwana iwo marara mhedzisiro iwe auri kutsvaga.
Mac yako anouya akashongedzerwa nechishandiso chinonzi 'Dhijitari Ruvara Meter', uye inogona kuwanikwa mu Launchpad> Vamwe kuburikidza nechiteshi chengarava (maitiro aungaona mumufananidzo uri pamusoro).
Mushure mekutanga iko kunyorera, unogona kudhonza pointer chero kwaunoda pahwindo, uye icharatidza maonero akawedzera enzvimbo mairi kunongedza, uye inosimbisa kuti ndizvo chaizvo zvauri kuyera, kwaunogonawo sarudza mafomati akawanda sekuzvarwa, P3, sRGB, Generic RGB, Adobe RGB, yy L * a * b *.
Mumuenzaniso uyu, ndiri kuyera iwo ruvara RGB yechimwe chikamu chePeace Wallpaper chinouya nekusarudzika pane desktop yeiyo OS X El Capitan.
Sezvauri kuona, hunhu hunosvika pakuva mutsvuku makumi masere nemasere, bhuruu makumi matatu nematatu, uye bhuruu yemakumi mana. Unogona kushandisa iwochete iwo maitiro mune application se Adobe Photoshop o Pixelmator kugadzira iwo iwo mavara iwo ekushandisa ekugadzirisa mufananidzo.
Ungazviwana sei mune hexadecimal fomati.
Iyo RGB inoratidzira ndiyo tip yeiyo iceberg ine iyo 'Dhijitari Ruvara Meter' pane yako Mac.Inogona zvakare kushandiswa kuwana hexadecimal color values, ayo anobatsira pa vagadziri vewebhu izvo zvavanoshandisa CSS y HTML nguva dzose. Seye graphic dhizaini uye mushambadzi, kwandiri zvakakosha, kupi Ini ndinowanzo shandisa zvinowedzerwa mumabhurawuza kuita kuti basa rinonetesa rive nyore kwandiri.
Kuchinja kubva pamitengo Yakajairwa decimal RGB kune hexadecimal values, iwe unofanirwa kudzvanya pane chishandiso 'Dhijitari Ruvara Meter' kuchinja menyu yako yako, wobva wadzvanya Display > Iwe unoratidza kukosha> Iine hexadecimal system kushandura kukosha kune iyi fomati.
Kunyangwe isiri chinhu icho iwe chaunoshandisa zuva rega rega, kunze kwemamwe mamiriro, iyo 'Dhijitari Ruvara Meter' chinhu chakanyanya, chiri nyore kwazvo chine OS X, uye icho ini pakutanga handaizowana kusvikira ndatanga kuongorora mafaira angu ekushandisa zvakadzama, ndosaka ndaida igovana nayo nevaverengi vese veSoy de Mac. Pandakaiwana, ndakatanga kuishandisa nguva dzese yekugadzirisa mifananidzo, kunyanya kwemavara, zvaienderana nekugadzirisa kwemifananidzo kwandinoshandisa kunyanya pawebhusaiti ino.
Iwe unogona zvakare kuve unofarira mune idzi dzidziso.
Maitiro ekumisikidza iyo yekuzivisa nzvimbo kubva kune yedu keyboard.
Kuvanza Zvinhu kubva kuSystem Preferences Menyu.
Mhanya chero chishandiso paMac yako kunyangwe isinga bve kubva kuMac App Store.
Fambisa yako yekubhurawuza nhoroondo neyakareruka keyboard.
Iko kushandiswa kweichi chiitiko kune iko kushandisa zvishoma, uye kune mushandisi akajairika zvinogona kunge zvisiri zvekushandisa zvishoma, uye zvehunyanzvi mu dhizaini uye mapeji ewebhu Inogona kuve yakaganhurirwa, asi haina kumbokuvadza kuziva kuita uku.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Tutorials » Maitiro ekuona iyo RGB kana hexadecimal kukosha kweipi pixel pane yako Mac skrini
Mini Calendar, yemahara kwenguva shoma yeOS X
Iyo CarPlay inosvika kune mamwe mamodheru, ino nguva kubva kumugadziri weHyundai